Ruoko Takura-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Our Services>Air Freight>Ruoko Kutakura
Hand Carry Services, inozivikanwawo seO Board Board, zvinoreva kuti paVashandi venguva vanozofamba vega nezvinhu zvevatengi semidziyo yavo uye vovatakura voenda navo kunzvimbo inodiwa. Nekudaro, PaNguva inovimbisa vatengi vavo kuchengetedzeka uye nekukurumidza kusvika kwenguva yavo yakaoma kuendesa '.
Iyo yakachengeteka, yakavimbika, uye inopa yako pasuru iyo yekuwedzera kwakanyanya kutarisirwa.
Sohologistics ndiye mutungamiri wemusika wepamba mukupa ino nyanzvi sevhisi uye mumwe weanonyanya basa Ruoko Rwokutakura mupi webasa muChina.
Uine makore anopfuura gumi ane ruzivo rwebasa pane Anobatsira kutakura uye anopfuura mazana matanhatu akadzidziswa zvakanaka ekuendesa vashandi pasi rese, Sohologistics inokupa iwe wehunyanzvi, unokurumidza, wakachengeteka uye wakavimbika Ruoko Rwokutakura sevhisi kutenderera pasirese.
Iwo Iwo mabhenefiti eSohologistics Anobatsira Kutakura Sevhisi
1. 365 * 24h: 365 mazuva 24 maawa egore-kutenderera sevhisi kuti uve nechokwadi chekuti zvinhu zvako zvinogona kuendeswa kune chero chikamu chenyika kana chero nguva nehunhu uye nenguva.
2.Kupindura nekukurumidza: nefoni kana MAIL, timu yedu yehunyanzvi ichagadzirisa mhinduro yako mukati me15-30 maminetsi.
3. Kunyanya-kupihwa kuendesa: vanopfuura mazana matanhatu vakarovedzwa-vakapihwa vashandi vanobva kumativi ese epasi vanoona kuchengetedzeka uye nekukurumidza kutumira zvinhu zvako nekupa yakazara-maitiro yakanyanya-yakapihwa yekutarisa uye yakakwana nzira yekubata.
4.Pakarepo ziviso: Nekuda kwekukosha, isu tinoshingairira kukuchengeta iwe kuburikidza neSMS, E-mail kana runhare pane yega kiyi yakakosha nzira yekuendesa.
5.Ruzivo rwakapfuma: nyatsonzwisisa zvirevo zvemitemo yenyika yega yega, izvo zvinogona kuve nechokwadi chekubvisa zvakatsiga uye kudzivirira njodzi dzinokonzerwa nekutyora kwako kusingazivi.
Ndezvipi zvigadzirwa zvinoenderana neHand Carry sevhisi？
Muchina zvikamu zveHigh-tech bhizinesi, zvemagetsi zvinoriumba, semiconductors, zvigadzirwa zvekufona, hupenyu-sainzi uye rubatsiro rwekubatsira zvigadzirwa zvekufambisa.
Kutsanya kwakadii kweRuoko Kutakura sevhisi？
Akakosha mabhenefiti kubva kuHand Carry sevhisi
Round-the-wachi sevhisi pamusuwo wega-wega kusvika pasuo, 6-12hours sevhisi pasuo nesuo mukati memakondinendi mamwe chete mazuva makumi matatu nemazana matatu nemashanu pagore.